Home » သတင်း » Cinegy Daniel2 GPU ကို codec ပြည်သူ့ Beta ကိုဝင်ရောက်လာ
Cinegy Daniel2 GPU ကို codec ပြည်သူ့ Beta ကိုဝင်ရောက်လာ
Cinegy က၎င်း၏အသစ်က NVIDIA GPU ကို၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအားသာချက်များကိုဗီဒီယို codec, Daniel8 အရှိန်မီးမောင်းထိုးပြ, 2K မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ပြန်ဖွင့်ပို့လိုက်ကြတယ်နှင့်အတူ tradeshows မှာပရိသတ်တွေဒါကခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအများပြည်သူ Daniel2 ကြော်ငြာတို Cinegy dual-core 2017 လက်မအရွယ် MacBookPro တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က Dell က Ultrasharp တွဲခဲ့သည့်အထဲမှာတစ်ခု NVIDIA GTX13 နှင့်အတူပြင်ပ Akitio Node "eGPU" box ကိုမှ Thunderbolt3 မှတဆင့်ချိတ်ဆက်ပြသခဲ့ပါတယ်ရှိရာဧပြီလအတွက် NAB 1080 မှာဖြစ်ပွားခဲ့သည် UP3218K 8K မော်နီတာ။ ဤသည် setup ကို 8fps @ 60K ကစား - သို့မဟုတ် vsync 180fps အထိမှာပိတ်ထားခံရတဲ့အခါ။ Cinegy လှည့်ကွက်များက၎င်း၏အိတ်ထည့်သွင်းထားပြီးနောက်ထပ် feature အသစ်ဟာလက်ရှိအချိန်ပြန်ဖွင့်နေစဉ်အတွင်း, 3D LUT-based အရောင် profile များကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သော BMD ဖြေရှင်းရန်သို့မဟုတ် Adobe က Speedgrade အဖြစ် packages များနေရာတွင်အစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ပေမယ့်ဗီဒီယိုကိုတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်း post ကိုထုတ်လုပ်မှုပြီးနောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်သို့ချက်ချင်းစှဲရရှိရန်အလွန်အသုံးဝင်သော feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်သောယင်ကောင်အပေါ်ကနဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်ပေးပါသည်။
ဒါက High-end NVIDIA ဂရပ်ဖစ်ကဒ်နှင့်အတူမည်သည့် Windows PC သို့မဟုတ်မှတ်စုစာအုပ်အပေါ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ တစ်ဦး 8K မော်နီတာမလိုအပ်ပါ။ "Cinegy Player ကို 3" ဒါပြန်ဖွင့်စဉ်ကနှင့်ထွက်အဖြစ်ဒယ်အိုးနဲ့ zoom ကိုစကေးကိုက်နိုင်ပါတယ် HD နှင့် UHD မော်နီတာ 8K ပြန်ဖွင်အတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။ ပူးတွဲဖန်သားပြင် 10-bit မှာအရောင်သစ္စာကိုထောကျပံ့လျှင်ဤကိုလည်း NVIDIA စားသုံးသူကတ်များကို အသုံးပြု. enabled နိုင်ပါသည်။
Cinegy ယနေ့ပြုလုပ် Daniel2 GPU ကို codec-based application များနှင့်အတူအများပြည်သူ beta ကိုဝင်ကြ၏မူကြောင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ကြောင့်လှောကျော်နောက်ဆုံးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးက applications များယခုမှာ Cinegy ရဲ့ Daniel2 က်ဘ်ဆိုက်ကနေအခမဲ့စမ်းသပ်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါ www.Daniel2.com - Cinegy Player ကို3နှင့်တစ်ဦးကို Adobe ပရီးမီးယားလိဂ်ပို့ကုန် plugin ကိုအသုံးပြုသူများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးနိုင်အောင် HDအဆိုပါ Daniel4 format နဲ့, UHD / 8K သို့မဟုတ် 2K output ကို။ 8K ပြန်ဖွင့်ကြိုးစားရန်လိုခငျြသောသူတို့အဘို့ကိုချက်ချင်းချက်ချင်းကို download များအတွက် Daniel4 က်ဘ်ဆိုက်ပေါ် 8K နှင့် 2K ဖိုင်တွေကိုသေးငယ်တဲ့ရွေးချယ်ရေးရှိသေး၏။
Cinegy ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့် CTO ဇန်နဝါရီ Weigner Cinegy ရဲ့ Daniel2 GPU ကို codec ကိုနောက်ကွယ်မှအခြားမည်သည့် codec ကိုအလင်းနှစ်ပေါင်းထွက်ခွာကမ္ဘာ့အလျင်မြန်ဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယိုကို codec ဖြစ်ပါတယ် "ဟုပြောသည်။ Daniel2 အပြည့်အဝ၏ 1100x ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သော, တိကျသောဖြစ် 8K မှာတစ်စက္ကန့် 7680 ဘောင်, ဒါမှမဟုတ် 4320 × 16 pixels ကိုမှတက်ကုဒ်နိုင်ပါတယ် HD - အပြည့်အဝကျော် 17000 ဘောင်သို့ဘာသာပြန်ဆို HD တစ်စက္ကန့်ဝှက်။ "
Cinegy လည်းပထမဦးဆုံး IBC 8 မှာတင်ဆက်ခဲ့သည့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ 2016K မှတ်တမ်းတင်များအတွက်တစ်ဦးစားသုံးမိပါ tool ကိုရှိပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်သက်ရောက်မှု, အရောင်ဆုံးမခြင်း, ချုံ့ချဲ့ခြင်းနှင့် TITLE ဖျော်ဖြေနေစဉ်ဒါဟာ 60fps 8K မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်တဦးတည်း၏တစ်ပြိုင်နက်ပြန်ဖွင့်, ဒါမှမဟုတ်မျိုးစုံ 8K စီးနိုင်ပါတယ်။ 2fps 3K သို့မဟုတ်ပိုမြန်မှာကစားနေစဉ် Daniel60-powered Cinegy Player ကို 8 နေဆဲမှတ်တမ်းတင်နောက်တဖန်စဉ်ပြေးရတာနဲ့လွန်း, scrubbing, zoom ကိုနှင့်ဒယ်အိုးခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီအပလီကေးရှင်းတစ်ခုအရေအတွက်ကို, အားကစားများအတွက်ဗွေဆော်ဖြစ်ခြင်းချက်ချင်းပြန်ကန်ထိုသို့စုံလင်သောစေသည်။ Daniel2 ရဲ့ interlacing ရှိနေပါသည်နှင့် PSNR ၏သူတို့အားနှိုင်းယှဉ်များမှာ လွန်စွာလိုလားသော'' s ကို DNxHR သို့မဟုတ် Apple ရဲ့ ProRes ။
Weigner အဆိုပါ Daniel2 codec ကိုဒီစွမ်းဆောင်မှုလျှို့ဝှက်ချက်က GPU ကိုအခြေပြုခံရဖို့ကိုတက်မြေပြင်ကနေ architected နှင့်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့ကွောငျးက "ကဆက်ပြောသည်။ အားလုံးအမွေမှီခိုအဟောင်း codec ဗိသုကာစွန့်ပစ်ခဲ့ကြသည်။ ဤသည် Daniel2 ကိုယ်တိုင်ကသာသဟဇာတဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်, ဒါပေမယ့်ဒီချဉ်းကပ်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုကြီးမားဖြစ်ကြပြီးယခုအချိန်အထိအားဖြင့်အားနည်းချက်များထင်ရှားသော။ "
အဆိုပါ Daniel2 codec ကိုကင်မရာအရင်းအမြစ်, တည်းဖြတ်ရေးနဲ့ post-ထုတ်လုပ်မှုကနေမှတ်တမ်းတင်အဖြစ်ပလေးအောက်များအတွက်ဒီဇိုင်းတစ်ခုဝယ်ယူခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှု codec ဖြစ်ပါတယ်။ Daniel2 အဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက်တူညီတဲ့အာကာသမှာပစ်မှတ်ထားနေသည် လွန်စွာလိုလားသော'' s ကို DNxHR Apple ရဲ့ ProRes သို့မဟုတ် Sony က'' s ကို XAVC ။
Weigner တမကြာမီ, လက်ရှိအချိန်အတွက်မျိုးစုံစီးကိုင်တွယ်နှင့် manipulate ဖို့လိုအပ်ကြောင်း 4K စနစ်များ 8K ဒီဇိုင်းအခါ, 16K ရင်ဆိုင်နေရသို့မဟုတ်တစ်ဦးကပြဿနာကိုသင် CPU ကိုသုံးပြီးစီးကုဒ်နိုင်လျှင်ပင်, သင်ဖြစ်ကောင်းနေဆဲအသုံးပြုချင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ "ကောက်ချက်ချ အဆိုပါ GPU ကိုရဲ့ memory ထဲကိုဝှက်စီးလွှဲပြောင်းရန်စနစ်တစ်ခုဘတ်စ်ကားဆို့နေသောဖန်တီးပေးသောဆိုးကျိုးများနှင့် filter များအတွက် GPU ကို၏ပါဝါကို။ က compressed လုပ်မထားတဲ့ counterparts တွေကို၏အရွယ်အစားတစ်အစိတ်အပိုင်း disk ထဲကသို့မဟုတ်ကွန်ယက်မှတဆင့်ဖတ်ပါနှင့်မြန်မြန် compressed လုပ်မထားတဲ့ frames များကိုကူးယူနိုင်ပါတယ်ထက် decompressed ခံရဖို့ GPU ကိုမှလွန်နေကြသည်စီးသောကွောငျ့ Daniel2 ထွန်းလင်းနေရာအရပ်ဖြစ်၏။
"ဒါနဲ့ Daniel2-enabled Cinegy Player3 တစ်ကြိမ်မှာသုံးအနိုင်ပေးပေးပါသည်: စနစ်ဘတ်စ်ကားဝေးလျော့နည်း bandwidth ကိုအသုံးပြုသည်, လျော့နည်းအာကာသသို့မဟုတ် bandwidth ကို disk ကိုသို့မဟုတ်ကွန်ယက်ပေါ်တွင်ကိုလောင်လျက်ရှိ၏ ကမရှိတော့မျိုးစုံစီးရန်ဒီကုဒ်လိုအပ်ပါတယ်အဖြစ်နှင့် CPU ကိုတခြားအလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ "
16K 8K Cinegy Cinegy Player ကို3codec Daniel2 post ကိုထုတ်လုပ်မှု SoftAtHome, MStar, CES2017 က Ultra HD ဖိုရမ်	2017-06-05
ယခင်: PrimeTime အလင်းတဲ့နေရာမှာဂု 51 LED ကို Fresnel ကိုလည်းအဆင့်မြှင့်တင်
နောက်တစ်ခု: The Next-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Sony က CineAlta!
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "Cinegy Daniel2 GPU ကို codec ပြည်သူ့ Beta ကိုဝင်ရောက်လာ" ။ http://www.broadcastbeat.com/cinegy-daniel2-gpu-codec-enters-public-beta/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။